ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: မင်းမှုထမ်း
ဒီစာအုပ် အကြောင်းတော့ ထွက်ကာစတုန်းက ကြားလိုက်မိတယ်ဗျ..၊ တော်ဝင်မိသားစု အတွင်းမှာ မြင်တတ်မယ်ဆိုရင် သံဝေဂ ရစရာတွေ အများကြီးပါပဲ၊ ရီဗျူးလေး ကောင်းတာနဲ့ ဖတ်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ...။း)
အခန်းဆက်တော့ ပြတ်တောင်း ပြတ်တောင်းဖတ်ဖူးတယ်.. မောင်မျိုးရေ
မောင်မျိုး ရီဗျူးရေးတော့ တစ်အုပ်လုံး ထိုင်ဖတ်ချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာပြီ...။
ရွှေမှာ လစဉ်မပျက်စောင့်ဖတ်ခဲ့ရတာက မင်းမှုထမ်းရယ်၊
တဲံ ရီဗျူးလေးဖတ်ပြီး အဲ့စာအုပ်ပြန်ဖတ်ချင်လိုက်တာ....။
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့... ဖတ်သင့်တဲ့စာအုပ်လေးဘဲနော်..ရန်ကုန်ပြန်ရင်ဝယ်ဖတ်မယ်... ကျေးဇူးနော်...
ဒီမှာ ဝယ်လို့မရဘူး ရှိဘူးတဲ့။ ကိုမျိုးဆီက ငှားရမယ်။
မလေး အိမ့်ချမ်းမြေ့ said...
``ဟုတ်ကဲ့…ကျွန်မ လမ်းပျောက်နေလို့ပါ ကျွန်မ အခန်းကို ပြန်ရောက်အောင် လိုက်ပို့လို့များ ရနိုင်မလား ´´
တောထဲတောင်ထဲဆိုဟုတ်သေးနော်... ကိုယ့်ရဲတိုက်ကြီးထဲမှာ ကိုယ်လမ်းပျောက်နေတာကို ..
She'd been pretty seductive since she was 19.
အဘိုးကြီးတွေလည်း ကမ္ဘာကုန်သည်အထိ သင်ခဏ်းစာ မရကြတော့ဘူးထင်တယ်။ ရာဇဝင်ထဲမှာ မှားခဲ့တဲ့အမှားတွေကိုလည်း ထပ်ခါထပ်ခါ မှားတတ်ကြတယ်။ မိန်းမငယ်ငယ်လေးတွေယူပြီး ရင်မှာမီးကိုပိုက်နေရတာ ဘယ်၂ယောက်ရှိနေကြပြီလဲ။ တစ်ကယ်ကို လှတာမက်လို့ ညစာခက်လည်း ဆက်လက်အငတ်ခံနေကြဦးမယ်ထင်ရဲ့။
ဒိုင်ယာနာဟာ သူ့ယောင်္ကျားထက်ငယ်တဲ့ ယောင်္ကျားတွေကို ကားနောက်ဖုံးထဲထည့်လာပြီး ရဲတိုက်ကြီးထဲ ခေါ်သွားတာတွေ ရဲတိုက် security ကင်မရာကနေ မြင်နေရတဲ့ ချားလ်ရဲ့ ရင်တွေ ဘယ်လိုနေလိမ့်မလဲ...
နောက်ဆုံးတော့ သူတို့မနှစ်သက်တဲ့ ဘာသာခြားယောင်္ကျားတစ်ယောက်နဲ့ ယူတော့မယ်ဆိုတော့ အပျောက်ရှင်းလိုက်ကြပုံရတယ်လို့ ဆိုတယ်။ အခုထိ ဒိုင်ယာနာစီးတဲ့ကားကို နန်းတော်က ဂိုဒေါင်ထဲမှာပဲ ထားတယ်၊ သက်ဆိုင်ရာကို မအပ်ဘူး။ (တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး???)
အလှနတ်ဘုရားမ ဒိုင်ယာနာဘက်က ကမ္ဘာတစ်ခြမ်းကျော်ကျော်က ရပ်တည်နေတဲ့အချိန်မှာ အကြိမ်ကြိမ်သစ္စာဖောက်ခံရတဲ့ အဘိုးကြီးချားလ်စ်ကတော့ သူ့ကိုနားလည်မယ့် သူနဲ့အတွေးခေါ်ချင်းရင်ဘောင်တန်းနိုင်မယ့် အဘွားကြီးကမစ်လာနဲ့ လက်ဆက်သွားတော အဘွားကြီးကမစ်လာဟာ စုန်းမကြီးဖြစ်လို့သွားတော့တယ်။ (အဘိုးကြီးချားလ်စ်ဟာ ဒိုင်ယာနာလို ချစ်သူတွေအများကြီးထားပြီး ဒိုင်ယာနာ့အပေါ်သစ္စာမဲ့တာမဟုတ်ဘူး၊ ကမစ်လာနဲ့ပဲ တွဲခဲ့တာလို့ ဆိုတယ်)။
ကမ္ဘာတလွှားက လူတွေကိုဖမ်းစားနိုင်တဲ့.... ဘယ်နေရာသွားသွား ကြာမျက်လုံးကြီးတွေနဲ့ လှန်လှန်ကြည့်တတ်တဲ့ ဒိုင်ယာနာ။ ရာဇအိနြေ္ဒကန့်လန့်ကာနောက်က ကြာမျက်ဝန်းကြီးတွေ...။ ဆယ်ကျော်သက်ထဲက ထိုမျက်လုံးကြီးတွေနဲ့ ရင်းနှီးလာရတာ ခုချိန်ထိ မြင်ယောင်နေမိတုန်း....။ ထိုအလှဘုရင်မရဲ့ ယောင်္ကျားနေရာမှာ တစ်ခါလောက်နေကြည့်မိတယ်။ နန်းတွင်းပွဲသဘင်တွေမှာ ကိုယ့်ဘေးက မိဘုရားမဟာ ကြောက်ရွံထိန့်လန့်ရှက်ရွံ့ဟန်ပြည့်နေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေသယ်ဆောင်လို့.. ။ ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တာက ရဲရင့်တည်ကြည်ပြီးရာဇအိနြေ္ဒအပြည့်ရှိတဲ့ မျက်ဝန်းတွေ......။
လောကဇာတ်ဆရာဆွဲခံထိတဲ့ ရုပ်သေးရုပ်လေးတွေလို ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း ခံစားမိပါတယ်...
( မေင်မျိုးစာဖတ်ပြီး တော်တော်လေး မုဒ်ဝင်သွားပါတယ်)
Assateague Island သှား တောလား - ၁ - မေရီလနျွးပညျနယျရဲ့အလှဆုံးအမြိုးသားဥယြာဥျက အစာတီကပျကှနျြး။ ဝိုငျးက သှားလညျခငျြတယျ ဆူနမျတို့ လညျး မရောကျဖူးဘူး။ ဆူနမျက ဝိုငျးကိုတအားခငျနတေော့ လတိုငျးသူ့ ဆ...
novel - (zawgyi) လေအေးစက်ကို ပိတ်လိုက်ပြီး ကားအရှိန်ကို လျော့ချလိုက်တယ်။ ခလုပ်နှိပ်ပြီး ပြတင်းပေါက်ကို ဖွင့်လိုက်တော့ လေပူတွေက ကားထဲကို အလုံးအရင်းနဲ့ ပြေးဝင်လိ...
ပထမအရှယျ - ငယျ ငယျက ကွားဖူး မှတျသားဖူး ယုံခဲ့ဖူးတဲ့ စကားတဈခှနျး … ပထမအရှယျ ပညာရှာ ဒုတိယအရှယျ စီးပှားရှာ တတိယအရှယျ တရားရှာ တဲ့ ။ တရားတှေ နာပွီး တဲ့ အခိုကျ … အသိထဲ ပေါ...